Manolotra $ 100k ho an'i Bahamas ny Global Tour Resilience Center
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Manolotra $ 100k ho an'i Bahamas ny Global Tour Resilience Center
The Ivon-toerana momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy fizahana krizy (GTRCMC) nanolotra fanamarinana $ 100,000 ho an'ny minisitry ny fizahan-tany any Bahamas ho fanamaivanana ny rivodoza Dorian.
Ny fizahana dia ny ezaky ny Jamaica Hotel and Tourist Association (JHTA) sy ny GTRCMC. Ity fandraisana anjara amin'ny fanomezana fanampiana ity dia mampiseho ny fanoloran-tenan'ny Ivotoerana fanampiana ireo fanjakana miankina amin'ny fizahantany izay miatrika ny ezaka fanarenana.
Ny rivodoza Dorian dia namely ny Bahamas tamin'ny volana oktobra 2019 ho rivodoza mahery sokajy 5 mahery. Namela fahasimbana niely tampoka ilay tafio-drivotra taorian'ny fiakarana. Ny tahirim-bola fanampiana GTRCMC dia napetraka hanohanana ireo toekarena rava ny fizahan-tany izay nisy fiantraikany tamin'ny tranga toy ny loza voajanahary sy ny areti-mifindra.
Ny fijoroana vavolombelona araka ny hita eo amin'ny sary dia avy amin'ny ankavia ka hatramin'ny ankavanana: Hon. Dominique Fedee, Filohan'ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba (CTO), Hon. Dorothy Charles avy any Dominica. ary Hon. Moses Kirkconnell avy amin'ny Nosy Cayman.
Ny Ivotoerana momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy krizy izay vao natomboka vao haingana dia manana teny filamatra: fanomanana, fisorohana ary fiarovana! Tanjon'ny Ivotoerana ny hanampy ny vondrom-piarahamonina manerantany hihataka amin'ny krizy rehetra mety hisy fiantraikany amin'ny indostrian'ny fizahantany, izay mpandray anjara lehibe amin'ny harin-karena faobe global. mpamoaka eTN Juergen Steinmetz dia ao anatin'ny vondrona manohana ny Ivotoerana.
Ho fampahalalana bebe kokoa, kitiho eto hifandray amin'ny pejy facebook an'ny Centre.